मधेश कला र मनोरंजन | Madhesh No. 1 News Porta……….News from Madhesh…
Home मधेश कला र मनोरंजन
Posted By: Madhesion: December 21, 2017 In: मधेश कला र मनोरंजन, मधेश विचार, मुख्य-समाचार, समाचारNo Comments
काठमाडौं, ६ पुस । मधेशी जनताको हक अधिकार र आन्दोलन माथि निमार्ण भएको राजनीतिक घटनाक्रममा अधारित चलचित्र मधेशी पुत्र २ लाई केन्द्रिय चलचित्र जाँच समितिले रोक लगाएका छन् । पुस ५ गते समितिले मध...	Read more
युवाहरुले निकै नै मन पराएका सन्गित ‘लभ के बेमारि’
Posted By: Madhesion: November 20, 2017 In: मधेश कला र मनोरंजनNo Comments
विरगन्ज – गायक सदाम हुसैन भने मधेश्मा सगितका क्षेत्रमा एक चर्चित प्र्तिभा हुन र अहिले चर्चामा रहेका वशि अख्तरले खेलेको भुमिका निकै रमनिय छ , अहिले भने नया नया भिडीयोमा आफ्नो भुमिका बलिउड स्ट...	Read more
Posted By: Madhesion: March 20, 2017 In: मधेश कला र मनोरंजनNo Comments
वीरगञ्ज, ७ चैत । वीरगञ्जमा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल हुन लागेको छ । माँ राधिका इन्टरनेशनल मुभिज प्रालिले पहिलोपटक वीरगञ्जमा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवलको आयोजना गर्न लागेको हो । आगामी २६ गते शनिबारक...	Read more
पोखराको लेकसाइडमा एक संगीतकर्मी युवाको पीडा
Posted By: Madhesion: January 16, 2017 In: मधेश कला र मनोरंजनNo Comments
काठमाडौं । निर्देशक राजु अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्म ‘लेकसाइड’ २८ माघबाट रिलिज हुने भएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइडमा एउटा युवक संगीत क्षेत्रमा लागेपछि भोग्नुपरेको विविध पीडालाई प्...	Read more
काठमाडौं । यतिखेर रेखा थापा र कोमल वलीको जताततै चर्चा छ । राप्रपाले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको आमसभामा हजारौंको भीड जुटाउन सफल भएपछि रेखा र कोमल चर्चाको पात्र बनेका हुन् । दुई राप्रपा एकी...	Read more
बैंकको जागिरे छाडेर यसरी मच्चाइन् यीनले उत्पात !
काठमाण्डौ,२९ पुस । नेपाली चलचित्र नगरीमा पछिल्लो समय दैनिकजसो नयाँ अनुहारको आगमन भइरहेको छ । नयाँको प्रवेशसँगै पुराना कलाकार पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता भाग्यमानी...	Read more